रवि लामिछानेको सिधै फोन ला*स जलाउने सपनालाई ! सडकमै उफ्रेर नाचे, पुण्य झन्डै कु’टिए | Public 24Khabar
Home News रवि लामिछानेको सिधै फोन ला*स जलाउने सपनालाई ! सडकमै उफ्रेर नाचे, पुण्य...
रवि लामिछानेको सिधै फोन ला*स जलाउने सपनालाई ! सडकमै उफ्रेर नाचे, पुण्य झन्डै कु’टिए
कालोपत्रे सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भएको एक वर्षमै सडक भा’सिएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकामबाट दुई जिल्ला जोड्ने उग्रतारा–मेलौली सडकको केही भाग भा’सिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको यो सडक अजयमेरु गाउँपालिका–१ पुईलेक बजारको भाग भा’सिनुका साथै कालोपत्रे उ’प्किएको छ ।सडक निर्माण थालिएको झण्डै तीन दशक पछि केही खण्ड कालोपत्रे गरिएको थियो । यो सडक डडेल्धुराको उग्रताराबाट बैतडीको मेलौली जो’ड्ने गरी निर्माण भएको छ । सडक कालोपत्रेको पहिलो चरणमा आठ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको थियो ।
Previous articleRabi Lamichhane को सिधै फोन ला$स जलाउने सपनालाई ! सडकमै उफ्रेर नाचे, पुण्य झन्डै कु’टिए
Next articleफोन मा चिट्ठा परेको छ भनेर २लाख रुपैया ठ*गी,दाङ जिल्ला दङ्गिशरण गाउँपालिका ५ सलैरा बस्ने सोभा बुढाथोकि